Cecilip Ihe Eji Eme Ulo Oria - Imewe Mmewe
Ihe Eji Eme Ulo Oria
Ihe Eji Eme Ulo Oria Emebere envelopu nke Cecilip site na njikwa nke ihe ndị dị na mbara ihu na-enye ohere iji nweta ụdị organic nke na-egosipụta ọdịiche nke olu ụlọ ahụ. Ewere nkebi a so na usoro nke ahịrị edere n’ime okirikiri usoro nke ike ga-akpụ. Mpekere ndị ahụ ejiri profaịlụ akụkụ anọ nke alumini ọlaọcha 10 cm na obosara 2 mm ma debere ya na tebụl aluminom nke ọtụtụ. Ozugbo a chịkọtara modulu ahụ, igwe eji agba nchara 22 na-ete nke akụkụ ahụ ihu.
Aha oru ngo : Cecilip, Aha ndị na-emepụta ya : Dante Luna, Aha onye ahịa : Dr. Jesus Abreu.
Ihe Eji Eme Ulo Oria Dante Luna Cecilip